Iyo JingPad A1 ichave nemutengo wekutanga we $ 549 yeiyo WiFi-chete vhezheni | Linux Vakapindwa muropa
Iyo JingPad A1 ichatanga pa $ 549 yeiyo WiFi-chete vhezheni.
Kunyangwe paine kufamba mune nharembozha yeLinux nyika kwenguva yakareba, ini pachezvangu ndainzwa kuti yanga yakamira kusvika kutanga kwegore rino. Mune nhare mbozha, maviri anomira panze, nharembozha uye mapiritsi, uye iri mune akakura ekubata zvishandiso ayo mashoma kufambira mberi kuri kuitwa Ini ndaifunga iyo PineTab yaizochinja chimwe chinhu, asi haina uye uye zvino ndave nekunzwa ikoko zvakare, asi ne JingPad A1.
Iyo PineTab yakavhurika sosi piritsi, iyo inonzwika yakakura pakutanga, asi ishoma kwazvo. Iyo Hardware yakangwara kwazvo (kutaura zvishoma) uye software iri kumashure kune iya yemasoftware. Iyo JingPad A1 zvakasiyana, kutanga ne yakanyanya advanced hardware uye kupera ne JingOS izvo zvinopa tariro. Nhau dzichangoburwa dzinotiudza nezve mutengo wayo.
Iyo JingPad A1 ichave yakakosha here?
Kubva pane izvo zvavakaburitsa isingasviki maawa makumi maviri nemana apfuura, mutengo weJingPad A24 ichatanga pa $ 549 iyo WiFi chete modhi. Ichave iine 8GB ye RAM uye 256GB yekuchengetedza, inova inopfuura yatingangoda mune dzakawanda kesi. Kana ari makamera ayo, ichave iine 16mpx huru imwe uye 8mpx kumberi imwe. Saka, pabepa, zvese izvi zvekutenderedza € 600 zvinoita kunge chibvumirano chakanaka.
Dambudziko? Kwandiri, dambudziko nderekuti isu hatichakwanise kuona mashandiro ayo, uye iyo PineTab uye masisitimu anogona kuiswa akaita vamwe vedu kusava netariro. Kana iyo inoshanda sisitimu inofamba zvakanaka, uye makamera anotora mafoto akanaka, ndinofunga iyo JingPad A1 ichave inopfuura chinonakidza chishandiso. Iyo yekushandisa sisitimu iwe yaunoshandisa nekutadza iyo yakavakirwa paUbuntu, saka unogona kuisa yakawanda software. Saka zvinogona kuve zvawaitarisira iyo PINE64 piritsi kuva, asi kashanu mutengo wacho. Nekuti ngatirege kukanganwa kuti pamwe unofanirwa kuwedzera VAT.
Kana iwe ukandibvunza kana ini ndichida imwe, mhinduro yangu yaizove "zvechokwadi", uyezve mushure mekunge vandivimbisa kuti chichava chigadzirwa chinogona kushandiswa zuva nezuva, kusiyana nePineTab. Zvisinei, Ini handizove wekutanga panguva ino. Kana ndikatarisa mavhidhiyo akati wandei paYouTube, ndinoona kuti zvinofamba mushe uye kuti vanhu vanogutsikana, ini ndichawana imwe yeKisimusi. Ini ndichatora yangu PineTab kutanga kunyangwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo JingPad A1 ichatanga pa $ 549 yeiyo WiFi-chete vhezheni.
Muchena kumba akadaro
Ini ndinofarira kumirira chimwe chinhu zana% yemahara, librem's iri munzira kwayo, asi handifunge kuti ndiri kuenda nenzira iyoyo, kana vakaramba vachitengesa yakavhurwa sosi marara uye kwete chaiyo yemahara software, ndiri kuenda kune 100 nhepfenyuro yekufunga
Pindura kuna Muchena kumba
Vakawana kusagadzikana muiyo eBPF subsystem iyo inobvumidza kuitiswa kwekodhi padanho rekernel